Cunsuriyiinta oo doonaya in ay soo galootiga ku celiyaan dalkoodii | Somaliska
Garabka dhalilyarada ee ururka cunsuriga ah ee SD ayaa bilaabay olole ay doonayaan in ay dib ugu celiyaan dadka soo galootiga ah ee aan 10-kii sano ee la soo dhaafay Sweden shaqo ka helin.
Cunsuriyiinta ayaa siinaya soo galootiga boorso ay ku jiraan macluumaad ku saabsan sida dalkaagii loogu noqdo iyo sida loo dalbado lacagta la siiyo qofka iskiis dalkiisii ugu noqonaya. Dadka ay raadsanayaan ayaa ah qaasatan dadka aan 10 kii sano ee la soo dhaafay aan shaqada ka helin Sweden.
Xitaa waxay 100,000kr ka dalbadeen Laanta Socdaalka si ay ugu maalgaliyaan barnaamijkoodaan. Laanta Socdaalka ayaa ku tilmaantay sheekada ay bilaabeen cunsuriyiinta mid borobogaando ah oo ay doonayaan in ay ku suuq geeyaan siyaasadooda.
Ujeedada cunsuriyiinta ayaa ah in ay wadanka ka saaraan dadka ay ku tilaamaameen kuwa aan guuleysan oo la dhihi karo Soomaalidi kow ayay ka galayaan maadaama aan ugu badanahay dadka shaqo la’aanta ah.
aniga waxaan oran laha ka wax run ah wa siidi aan anigaba samayn laha
Ifrax so ma ogid inay somalid dhaxdoda isjeclayn blse ajnabiga jecelyihin,maxa susata 2000 in qaxoti zanzibar ah muqdisho imaden lo aruriyay wax kasto malintasna dagal xun o dad kudhinten aya muqdisho kadhacay,
March 6, 2012 at 12:51
asc asxabey meqay sinayan qofki naqanaya wayo iswedhan katag lacagna qado wax ka fian malahan ee meaqa dhantahay lacagta haleyso shega qofki wax ka og mahad sanid
ASC . waa nin dhulkiisa jooga wax laga dhihi karo ma leh lakin wali waxaa jira fursad manta in aan dareeno dhibato naaca ah aniga aya mas,uul ka ah ,
lacagtu waa 100,000,000
Walaalaha sita magacyada Ifka iyo Zaki waxaan idiin sheegayaa in dadka wadankan idinku cunsiriyeeya aysan iyaga laftirkoodu asalkoodu swidhishba ahayn ee ay wadankan yimaadeen aabayaashood ama awoowayaashood waqti sii horeeyay iyagoo shaqo usoo raadsaday qarnigii wershadaha. Haddii aad hadalkeygan dib usii baartaan waad ogaan doontaan xaqiiqada. Qolada cunsiriyiinta ahna waxan dhihi lahaa haddii dalkii laga yimid lagu laabanayo adinkaa naga horeeya ee taas ogaada kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk.
Aad bad umahadsantahay khadijo
Kuwan wa xasidin daran waxa laga yaba in ay somalida mar un ay ubahdan marka halaga aqonsado dadka na so dhoweyey o ah iswedhanka kale